यसकारण रहन्छिन् दीपिका हमेशा फिट ! | Ratopati
यसकारण रहन्छिन् दीपिका हमेशा फिट !
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeमाघ २९, २०७४ chat_bubble_outline0
मुम्बई –अभिनेत्री दीपिका पछिल्लो समय चलचित्र ‘पद्यावत’का कारणले चर्चा छिन् । यो चलचित्रमा उनले रानी पद्यावतीको भुमिका निर्बाह गरेकी थिइन् । चलचित्रमा दीपिकाले निर्बाह गरेको भुमिकाको धेरैले खुलेर तारिफ गरे । उनले चलचित्रमा गरेको नृत्यको स्टायलको समेत चर्चा भयो ।
उनको यो सफलता राज उनको फिटनेश लुक नै हो । उनी फिटनेशका कारणले हमेसा हट रहने गरेकी छन् । उनी बलिउडकी फिट अभिनेत्री मध्यकी एक पनि हुन् ।
उनको फिटनेश प्रतिको लगाब निकै राम्रो रहेको छ । उनी बिहानदेखि बेलुकासम्म फिटनेश रुलको फलो गर्ने गर्दछिन् । यसका लागि उनी डाइट र एक्सरसाइज सिस्टमेटिक तरिकाले गर्ने गरेकी छन् । उनी ठिक्क मात्रामा खाने, बिहान छिट्टै उठ्ने जस्ता फिटनेशका धेरै रुल फलो गर्ने गर्दछिन् ।
उनी हरेक बिहान एक गिलास तातो पानीसँग एक चम्चा शहद मिलाएर खाने गर्दछिन् । त्यसको अलवा उनी २ एग वाइट, २ बदाम, एक कप फ्याट नभएको दुध लगायत खाने गर्दछिन् ।
दीपिका लन्चमा एक कचौरा ग्रिल्ड फिश, अथावा साग खाने गरेकी छन् । उनले डिनरमा सलाद, रोटी र साग रुचाउने गरेकी छन् । उनले बिहान ३० मिनेटको मनिङवाक अनिबार्य गर्ने गरेकी छन् । योग पनि उनको नियमित एक्सरसाइज रहने गरेको छ ।
सोनू निगम नर्भिकबाट डिस्चार्ज भएपछि मुम्बई पुगेः एयरपोर्टमा ह्विलचेयरमा देखिए